Iqabane elifanelekileyo leNdoda yeSagittarius: Inomdla kwaye inomdla - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Iqabane elifanelekileyo leNdoda yeSagittarius: Inomdla kwaye inomdla
Iqabane elifanelekileyo leNdoda yeSagittarius: Inomdla kwaye inomdla
Xa isiza iqabane elifanelekileyo lendoda yeSagittarius, lo ngumntu onomdla kwaye olungele ukuzonwabisa njengaye. Luhlobo olungachithi ixesha elininzi endaweni enye, ke into ayifunayo ngumntu olungele ukuhamba nokuhlola.
Umfazi onomfanekiso ngqondweni osisityebi kwaye uphantsi emhlabeni ngaxeshanye ulungile kuye. Ngaphandle kwayo yonke le nto, ufuna umntu onokukhathalela ikhaya kwaye onokwenza imali yedwa.
Ngaphezulu koku, kufuneka akulungele ukumnika yonke inkululeko ayifunayo kuba indoda engu-Archer yenye yezona zimeleyo kwi-zodiac iphela. Alikhathazi ngenenekazi elinenkululeko kwaye elizithembileyo njengalo, ngoko akunakulindeleka ukuba le ndoda ibenomntu onamathele okanye ongakwaziyo ukujongana neengxaki eyedwa.
Kulungile ukuba akaze abe nezinto okanye abe nomona, oko kuthetha ukuba ugqibelele kumntu othanda ngamanye amaxesha ukuba ngudlalani kwaye abe mnandi namanye amadoda. Ukujonga yonke imiqondiso ye-zodiac, kunokuthiwa ii-Aries zenza iqabane elifanelekileyo lendoda yeSagittarius.
Aba babini banokuba nolwalamano lweemvakalelo kunye nezinto ezifanayo, ingxaki yabo kuphela kukuba bobabini banomoya wokhuphiswano. Kuyenzeka ukuba baphele bezama ukuba ziincutshe kuyo yonke into, umzuzu apho bengasayi kukhathalela malunga nokuba zininzi kangakanani izinto abafana ngazo.
Nkqu nezibini apho amaqabane afanayo aneengxaki, ke azenzi mahluko. Elinye iqabane elifanelekileyo lendoda yeSagittarius ngumfazi owazalelwa eLeo. Ubudlelwane phakathi kweli nenekazi kunye nendoda engu-Archer buyasebenza ngokwenene kuba omabini la maqela athembekile kwaye ahloniphekile.
Oku kuthetha ukuba umtshato wabo ungaphumelela kwaye uhlale ixesha elide. I-Sagittarius luphawu oluthanda wonke umntu nayo yonke into, kubandakanya izilwanyana. Ke ngoko, unokuhlangana nomphefumlo wakhe kumdlalo wenja, kumyezo wezilwanyana okanye kwimatshi yamalungelo ezilwanyana.
Ungayiphumelela njani indoda eyi-sagittarius
Kuba unemfesane kakhulu, unokufunyanwa esenza ukutya kwiindawo zokuhlala ezingenamakhaya okanye anyamekele abagulayo kwizibhedlele. Ukhuphiswano kakhulu, uyakuthanda ukudlala imidlalo kunye nokuzibandakanya kwimidlalo.
Unomdla wokuhambahamba emhlabeni, unokusebenza njengesikhokelo kwiarhente yokuhamba, okanye umqhubi wenqwelomoya. Uyakuthanda ukuya kwiindawo ezingaqhelekanga, oko kuthetha ukuba uhlala esiya kwimivalo ekhonza ukutya okuvela kwilizwe elikude.
Unomdla kakhulu kubafazi abakrelekrele abazenzela imali. Akunzima ukufumana ingqalelo yakhe kuba yena izinto wonke umntu unomdla. Ezinye iingxaki zinokuvela xa sele enesithukuthezi, kwaye oku kwenzeka ngokulula kakhulu, oko kuthetha ukuba ufumanisa kunzima ukuzibophelela kumntu omnye kuphela.
Kufuneka abe namava kunye nabasetyhini abaninzi, ke inenekazi elifuna ukumgcina linomdla kufuneka liqiniseke ukuba ubomi babo njengesibini bunomdla kwaye bunezinto ezininzi ezahlukeneyo. Ukuba uziva ngathi ubambekile, indoda yeSagittarius iya kuhlala ijonge ukudibana nomntu omtsha.
Kuyafana ngobomi bakhe bothando. Ufuna umfazi oyilayo ofuna ukuzama yonke into kwigumbi lokulala. Akunakwenzeka ukuba umothuse ngento kuba ulungele nantoni na. Ngokubhekisele ekufumaneni umfazi wamaphupha akhe, akaze ayeke ade abe nomntu omthandayo. Xa edlala ngothando, uyathanda ukudlala kwaye abe nokulawula imeko.
Ukuzonwabisa kunye nokuzonwabisa
Ingqondo yakhe ihlala ivulekile ukuzama izinto ezintsha, ungasathethi ke ukuba unomdla kakhulu ngaye wonke umntu. Nangona kunjalo, kungamthatha ixesha ukuba aqonde ukuba ukuze athandane, kufuneka azi ukuba luyintoni na uthando.
Umfazi we-aries kunye ne-gemini man bathanda ukuhambelana
Ubuntu bakhe bunokuba mbini, nto leyo ethetha ukuba angatshintsha indlela aziphethe ngayo xa edlala ngothando, ukusuka kumzuzu omnye ukuya komnye. Oku kuthetha ukuba kunokuba nzima ukumisela ukuba ngubani ngokwenene. Omnye umzuzu uyathandana kwaye uyakhathala, omnye ubonakala ngathi akakhathali ngomntu ebenomdla kuye ngaphambili.
Oku kuthetha ukuba ufuna umntu onomonde, umfazi onokunyamezela lonke utshintsho kubuntu bakhe. Ngokuqinisekileyo ufuna ukuba nenenekazi elifana naye, elinomdla wokufunda izinto ezintsha kunye nokufumana ubomi ngendlela eyahlukileyo ngayo yonke imihla edlulayo.
Ukwafuna ukuba umntu amjoyine kuhambo lwakhe, umntu ofuna ukuzama ukutya okutsha kwaye aphuphe naye malunga neendawo abaza kuzindwendwela kunye.
Ngokunyanzelwa, indoda yakwaSagittarius ingathatha umfazi ngomhla ayokuya nayo kwindawo yokutyela ebiza kakhulu ngobusuku obunye, emva koko angamthatha ayokwakhela ababaleki izindlu kwiindawo ezithile zehlabathi eziye zehlelwa ziintlekele zemvelo.
Luhlobo lokubhukisha iinqwelomoya ukusuka kusuku olunye ukuya kolunye, ke kufuneka umntu ozenzekelayo kwaye olungele ukonwaba ecaleni kwakhe. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, akakhathazeki ukuba lo mfazi uthandana nabanye abantu.
Ehlekisayo, onomdla kwaye onomdla ebhedini, naye uyanconywa kakhulu ngezakhono zakhe zokwenza uthando. Abafazi abaninzi bayamthanda ngokuthetha okusengqondweni yakhe nokusondela kubo ngqo.
Unika ukubaluleka okuninzi komzimba, ke uyawathanda amantombazana ahlala ejongeka elungile, nokuba akenzi kwinto yokuhombisa kunye neempahla ezintle. Eyona nto ibaluleke kakhulu kuye kukuba umfazi amthandayo unengqondo evulekileyo kwaye akakhathali kakhulu ngokuzinza.
Kwigumbi lokulala, uya kuzama yonke into kwaye angabi nazintloni xa isithandwa sakhe siphakamisa into entsha. Ubona isondo njengomdlalo, oko kuthetha ukuba ufuna umntu ononyamezelo oluninzi. Kwimeko apho umfazi wakhe angakhathali kakhulu malunga nokuba uchitha ixesha elingakanani ekhayeni labo, ungoyena wonwabileyo kuba ngenene ayilohlobo lwasekhaya.
nguwuphi umqondiso ngoJulayi 22nd
Ngokuchasene noko, uyakucaphukela ukubotshelelwa kwindawo enye kuphela kwaye uthanda ukuhamba ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, ukuhamba yeyona nto ayithandayo.
Oku kuthetha ukuba akakho ekhaya kakhulu, kananjalo ukuba akanalo uqeqesho olunyanzela wonke umntu ukuba ahloniphe imigaqo ethile yasekhaya. Akayi kuze acele umfazi wakhe ukuba amlinde ngesidlo sangokuhlwa, kodwa ngekhe ahlambe izitya okanye aqinisekise ukuba wonke umntu unempahla ecocekileyo.
Amandla akhe kunye nezinye iimpawu zodiacac
Eyona nto ayifunayo ekhaya kukuzaliswa yintsini. Umntu ohlala naye kufuneka akulungele ukuva iziqhulo ngalo lonke ixesha, kwaye uxelelwe inyani ebukhali. Kungenxa yoko le nto engadibaniyo nabantu ababuthathaka abangakwaziyo ukwamkela ukuxelelwa ngokungqalileyo ukuba benza ntoni.
I-diplomacy kunye neqhinga alizange lichaze indoda yeSagittarius kuba izama ukunyaniseka kungakhathaliseki ukuba indleko. Ezona mpawu zihambelana kakhulu neSagittarius ziiAries, uLeo, iLibra kunye neAquarius.
Ii-Aries ziyakuthanda ukusebenza kwaye zenze izinto zenziwe, ngelixa i-Sagittarius ikonwabela ukuhamba nokuba phakathi kwezinto. Ngaphezu koku, bobabini bafuna ukukhululeka kwaye bangahlali endaweni enye kuphela.
Ngomfazi kaLeo, indoda yakwaSagittarius inokuziva ilungile ngaye kuba ibona inenekazi lalo lifuna ukuhoywa njengaye. ILibra imenza ukuba azithembe kwithamsanqa lakhe kwaye aphile ubomi obulunge ngakumbi, ngelixa ene-Aquarius, uya kuthanda ukumbona engaqhelekanga kwaye enobuchule.
Ithemba kunye nesidingo senkululeko yendoda yeSagittarius inokumenza umfazi wase-Aquarius athandane naye ngokulungileyo. I-Sagittarius ayihambelani kwaphela neVirgos, iCapricorn kunye nePisces. Kungenxa yokuba iVirgo ilungisiwe kwaye ayinakuqonda ukuba kutheni uMtoli kufuneka ahambe kakhulu.
Ngaphandle kweVirgo ikwangumhlaba, oko kuthetha ukuba ufuna ukuba nobudlelwane obuzinzileyo kunye obuhlala ixesha elide, ngelixa iSagittarius ingazikhangeli ezi zinto. Ngamanye amagama, indoda yakwaSagittarius inokuziva ngathi ivaleleke kakhulu kumfazi weSagittarius.
NgeCapricorn, akafumani mhlaba uqhelekileyo. Ngaphezulu koku, ibhokhwe inokumfumanisa ukuba ingaphezulu kakhulu kwaye ingaze ibe nzulu. Nangona kunjalo, banokuba ngabahlobo abasenyongweni ukuba iimeko zikolu hlobo.
Xa kuziwa kumfazi wePisces, indoda yaseSagittarius inokuvana kakhulu naye ekuqaleni, kodwa oku kungatshintsha kwakamsinya nje ukuba into iqale ukungahambi kakuhle kubudlelwane babo.
Iingcebiso zothando Wonke umntu weSagittarius kufuneka azi
Ukuhambelana kweSagittarius Ethandweni
amadoda ane-venus kwi-virgo
Indoda yaseSagittarius emtshatweni: Ngaba luhlobo luni lomyeni yena?
I-Rooster Man Pig Woman ixesha elide ukuhambelana
umhlaza indoda pisces ubuhlobo mfazi
Indoda ye-aquarius kunye ne-pisces yokuhambelana komtshato womfazi
Iiscorpios zijongana njani nokwahlukana
pisces indoda yomhlaza umfazi umtshato
ilanga kwindlu yesithandathu